Gary ၏ TEDx ဟောပြောချက် - "The Great Porn Experiment" (၂၀၁၂)
သတင်းများ '' Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် ''
ဂယ်ရီ၏ TEDx ဟောပြောချက် -“ The Great Porn Experiment” (၂၀၁၂)
စာတန်းများကို အာရဗီ အပါအဝင် အခြားဘာသာစကားများအတွက်လည်း ရနိုင်သည်။한국의၊ Português, ခကျြခကျြ, ဒတ်ခ်ျဒတ်၊ Estonian အဘိဓါန်ပြင်သစ်၊ဂရိ၊ עברית, ဟန်ဂေရီ၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ ပါရှန်၊ ပိုစကီး၊ ရုရှား၊ ဆားဘီးယား၊ စလိုဗက်၊ စပိန်နှင့် တူရကီ. သူတို့ကိုကြည့်ရှုဖို့, YOUTube ကိုကြည့်ရန် YouTube 'လိုဂိုကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်ထိုသို့ရောက်သောအခါစာတန်းများအတွက် (CC ၏ညာဘက်အောက်ခြေ) အတွက်“ CC” ကိုနှိပ်ပါ။ အတွက် Ver YBOP စီးရီး စပိန်။ Make သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားစာတန်းများကို! ကြည့်ပါ - "မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု" ၏မှတ်တမ်း - TEDx Glasgow (2012).
“ The Great Porn Experiment” (၂၀၁၂) အတွက်ပြည့်စုံသောပင်ကိုယ်မူလပံ့ပိုးမှု
ဆလိုက် 2012-1: TEDx Glasgow (17) - "မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု" အတွက်ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှု
ဆလိုက် 2012-18: TEDx Glasgow (35) - "မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု" အတွက်ပင်ကိုယ်မူလထောက်ခံမှု
သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာင် မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု TEDx ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဆွေးနွေးမှုကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်တင်ပို့ခဲ့သည်။ ဤ TEDx ဟောပြောချက်သည် Philip Zimbardo ၏တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကိုTED ဟောပြောပွဲ၊ ဂလက်စ်ဂူးပရိသတ်ကဟောပြောချက်မတိုင်မီကကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
ဒီဇင်ဘာလ 2011 ကတည်းကသုတေသနနှင့်လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား supporting ၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ထောက်ခံမှုဖို့ရောကျပွီ The Great Porn စမ်းသပ်မှု ခဲ့ကြရာသုံးမူလတန်းအခိုင်အမာ:
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းထဲမှာဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ3အဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်; နှင့်
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများ (အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာများ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, etc) ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။
အောက်ပါတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တိုတောင်းသောအကျဉ်းချုပ် ဖန်ဆင်းတောင်းဆိုမှုများထောက်ပံ့ပင်ကိုယ်မူလနှင့်လက်တွေ့အထောက်အထား မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု (ဆလိုက်-by-ဆလိုက်ထောက်ခံမှုများအတွက်အထက်တွင်2စာမျက်နှာများကိုကြည့်ရှုပါ) ။
၏ဤစာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ causation အကြံပြု, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ငါ 2016 အမေရိကန်ရေတပ်ဆရာဝန်များနှင့်အတူညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အပေါ်စာပေ၏အောက်ပါ7ပြန်လည်သုံးသပ်ပူးတွဲရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာပြန်လည်သုံးသပ်ဖြစ်ပြီး, ကျယ်ပြန့်ပင်ကိုယ်မူလ porn-သွေးဆောင် ED အထောက်အပံ့အဖြစ်နုပျို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်နီးပါး 1000% မြင့်တက်ထုတ်ဖော်မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ၏ဆှေးနှေးပါရှိသည်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။
၏ဤစာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 75 လေ့လာမှုများကျော်.
အထက်ပါလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 130 ကျွမ်းကျင်သူများက (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများ, ဗွီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကိုပါရှိသည် သူကိုအသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသပါပြီ။
(3,000): အချို့ 1 ဤသုံးပါးစာမျက်နှာများပေါ်တွင် (သို့မဟုတ်ထံမှဆက်စပ်) ကိုပြန်လည်နာလန်ထူအကောင့်ကြားတွင်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများမှပြန်လည်ထူထောင်ယောက်ျား၏အကောင့်မှတ်တမ်းတင်ကိုလည်းတွေ့မြင် ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 1, (2) ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 2, (3) Accounts ကို 's Page3ပြန်ဖွင့်။ အောက်ပါရှစ်စာမျက်နှာများ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များဆံ့: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2) အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းထဲမှာဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ3အဓိကစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည်
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုဆယ်ခုစာရင်းတွင်“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (နှင့်ဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းကဲ့သို့အင်တာနက်စွဲလမ်းခွဲများ) တည်ရှိပြီးအခြားသောစွဲလမ်းမှုများနှင့်တူညီသောအခြေခံယန္တရားများနှင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံမှုကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုနယ်ပယ်အဆအဆကြီးထွားလာသည်။ ၂၀၁၇ တွင်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု ၃၆၀“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” ရှိသည်။ သူတို့အားလုံးသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အင်တာနက်စွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည် အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု”)။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တော်တော်များများအင်တာနက်စွဲလမ်းလေ့လာမှုများ၏ဒီဇိုင်းကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံပါသည် ဖြစ်စေတဲ့ ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုစိတ်ကျရောဂါ, ADHD, စိုးရိမ်စိတ်, အဖြစ် (အချို့အတွက်) ရောဂါလက္ခဏာတွေထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများများ၏စာရင်းကို: အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုသရုပ်ပြသည့်လေ့လာမှုများ ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများ.
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု (1) အသိ, (2) Desensitization, နှင့် (3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality): သုံးအဓိကညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူပေါ်ပေါက်သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မတ်လ, 2012 ကတည်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်အများကြီးအာရုံကြောသုတေသနထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံးသုံးကြားတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲအပေါ် 54 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ:
ပိုမိုညံ့ဖျင်းသော အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ (hypofrontality) သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများ/လိင်စွဲသူများတွင် ပြောင်းလဲထားသော ကြိုတင်လုပ်ဆောင်မှုများအား အစီရင်ခံတင်ပြသည့် သုတေသနလေ့လာမှုများ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
အဆိုပါ 54 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ အဆိုပါလုပ်ပေးအဖြစ် (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း), အစွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး 30 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အလေ့အထ
ငါသည်လည်း (စွဲတစ်ခုအရိပ်အယောင်ဖြစ်နိုင်သည့်) ငါ၏အ TEDx ဟောပြောပွဲအတွက်တင်းမာမှုသို့မဟုတ်လေ့ဖော်ပြခဲ့သည်။ porn အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အတူ, သည်းခံစိတ် / လေ့ porn ၏လက်ရှိအမျိုးအစားသို့မဟုတ်အမျိုးအစားနှင့်အတူပျင်းဖို့ဦးဆောင် သာ. မြတ်ဆွမကြာခဏ porn သစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလွန်ကဲအမျိုးအစားများမှမြင့်တက်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သည်။ လက်တွေ့နှင့်သို့ရာတွင်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏ porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဦးဆောင်သည်းခံစိတ်များအတွက်တည်ရှိနေစဉ်, မည်သည့်လေ့လာမှုများရှိသနညျး အမျိုးမျိုးသောသွယ်ဝိုက်နည်းလမ်းများအလုပ်သမား, 45 လေ့လာမှုများကျော် တွေ့ရှိချက်များကို“ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်” သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအမျိုးအစားများသို့တိုးပွားလာခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကသုတေသနအဖွဲ့များအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအမေးမလျှောက်သော 2017 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ တိုက်ရိုက် ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေအကြောင်း။ 2020 ၏အဖြစ်ရှိပါတယ် porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 13 လေ့လာမှုများ.
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းစွဲ debunk ကြောင့်အာရုံကြောလေ့လာမှုများကော? အဘယ်သူမျှမရှိတယ်။ ၏ဦးဆောင်ရေးသားသူနေစဉ် Prause et al ။ , 2015 သူမ၏တည်းသော EEG လေ့လာမှုညစ်ညမ်းစွဲလိမ်အခိုင်အမာကိုး peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများသဘောမတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015 ဤအ 10 စာတမ်းများပြည်နယ်ပေါ်တွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကြောင်း Prause et al။ အမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ desensitization / လေ့ (စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း), အဖြစ် နည်းသော vanilla porn (ဓာတျပုံ) မှဦးနှောက်ကို Activation မှဆက်စပ်ခဲ့သည် သာ. ကြီး porn အသုံးပြုခြင်း။ မယုံကြည်သောသူတို့ကား, Prause et al။ အသင်းရဲရငျ့စှာဒီကနေယူတစ်ခုတည်းအပိုဒ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်မှားယွင်းစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိသည်ဟုအခိုင်အမာ 2016 "အယ်ဒီတာမှစာ။ " ဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုဖျောပွအဖြစ်အဖြစ်မှန်အတွက် Prause အက္ခရာ, ဘာမျှမလိမ်: အယ်ဒီတာ "Prause et al မှပေးစာ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု " (2016).
သို့သော် 'စွဲလမ်းမှု' သည် APA's တွင်မပါဝင်ပါ DSM-5ညာဘက်? အဆိုပါယားနောက်ဆုံး 2013 အတွက်လက်စွဲ updated လိုက်တဲ့အခါ (DSM-5)ဒါကြောင့်တရားဝင်ဆွေးနွေးရန်အတွက်အစားဝင်ရောက်ခြင်း "အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ" ကိုစဉ်းစားကြဘူး "hypersexual ရောဂါ။ " ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အဆုံးစွန်သောထီးအသုံးအနှုန်းကပါဝင်ဘို့အကြံပြုခဲ့သည် DSM-5 ရဲ့ ပြန်လည်သုံးသပ်၏နှစ်ကြာလိင်လုပ်ငန်း Group မှပိုင်ဆိုင်တယ်။ သို့သော်တစ်ဦးဒသမနာရီ "ကြယ်ပွင့်အခန်းထဲက" session တစ်ခုအတွက် (ကသူ Work Group မှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအရ), အခြား DSM-5 အရာရှိများတဖက်သတ် hypersexuality ပယ်ချ, ယုတ္တိမတန်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်းအကြောင်းပြချက်ကိုးကား.
ရုံမတိုင်မီရန် DSM-5 ရဲ့ 2013, သောမတ်စ် Insel, စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute ၏ထို့နောက်ဒါရိုက်တာအတွက်ထုတ်ဝေ က DSM အပေါ်မှီခိုရပ်တန့်ဖို့စိတ်ကျန်းမာရေးလယ်ကွင်းများအတွက်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်သတိပေး။ ယင်း "အားနည်းခြင်းတရားဝင်မှု၏၎င်း၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်"ဟုသူကရှင်းပြသည်နှင့်"အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ စံသတ်မှတ်ချက်အရရွှေစံချိန်” အနေဖြင့် DSM အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုပါကကျွန်ုပ်တို့အောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ။"သူကဆက်ပြောသည်"NIMH ကွာ DSM category ထံမှ၎င်း၏သုတေသန re-orienting ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်s ။ " တနည်းအားဖြင့် NIMH သည် DSM တံဆိပ်များ (နှင့်သူတို့မရှိခြင်း) အပေါ် အခြေခံ၍ ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းသုတေသနကိုရပ်တန့်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်။
American Association of Addiction Medicine
ဗိုလ်မှူးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလာမည့်ယား၏ရွေ့လျားနေကြသည်။ အဆိုပါ စွဲလမ်းဆေးပညာ American Society (ASAM) ငါသည်ငါ့ TEDx ဆွေးနွေးချက်ကိုပြင်ဆင်လအနည်းငယ်မှီ, သြဂုတ်လ, 2011 အတွက်ညစ်ညမ်း-စွဲဆွေးနွေးငြင်းခုံအခေါင်းအတွက်နောက်ဆုံးလက်သည်းပါပြီသငျ့သညျအဘယျသို့ထု။ ASAM မှာထိပ်တန်းစွဲကျွမ်းကျင်သူများကသူတို့ရဲ့ဖြန့်ချိ စွဲလမ်း၏ဂရုတစိုက်ထွင်းထုနှင့်အဓိပ္ပါယ်။ အသစ်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် အဓိကအချက်များကိုအချို့စေသည် ငါသည်ငါ့ဟောပြောပွဲအတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မူးယစ်ဆေးဝါးများလုပ်ပေးအဖြစ်ဗွေဆော်, အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောအခြေခံနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေ။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့, စွဲလမ်းများစွာကိုမရ, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တဦးတည်းရောဂါ (ခွအေနအေ) ဖြစ်ပါသည်။ ASAM အတိအလင်းဖော်ပြထား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစွဲတည်ရှိ နှင့်သေချာပေါက်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းတှငျတှေ့တူညီတဲ့အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်ပွားရမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ညာယားရဲ့အလွန်အကျွံသတိသတ်မှတ်ထားရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ ယင်း၏အဖြေရှာတဲ့ manual ၏နောက်တစ်နေ့ထုတ်ဝေခြင်း, ICD-11, 2019 အတွက်နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိရန်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အသစ်က ICD-11 "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ" အတွက်တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုပါဝင်သည် ၎င်းသည်လူအများစုအနေဖြင့်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ဟုခေါ်သောအရာကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်သင့်တော်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့် DSM လိုင်းကျလိမ့်မည်
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု ညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားသောလူငယ်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်တင်ပြသော“ The Other Porn Experiment” အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ TGPE သည်“ နှိုးဆွမှု (အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့် ၄ င်း၏အမျိုးအစားများ) ဦး နှောက်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပြ,နာ၊ ယေဘူယျစိုးရိမ်မှု၊ 2017 ၏အဖြစ်တည်ရှိ ဆက်စပ်လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာ ဒီအခိုင်အမာထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်တစ်ဒါဇင် causation လေ့လာမှုများ။
ပထမဦးစွာယခုရှိပါတယ် 85 ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ခံစားမှုကျန်းမာရေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလင့်ထားသောလေ့လာမှုများနှင့်ဆင်းရဲတဲ့သိမြင်မှုရလဒ်များကျော်.
လေ့လာမှု ၈၀ ကျော်ကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည် ဖြစ်စေတဲ့ , စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ။
ငါသည်လည်းယောက်ျားကွဲပြားခြားနား porn ဖြတ်ပြီးနောက်အမျိုးသမီးတွေမြင်သောဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒီ (သွယ်ဝိုက်) ထောက်ခံမှုမှာတော့ဒီမှာပါ ၃၅ ခုကျော်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအားအမျိုးသမီးများအပေါ်ထားရှိသည့်“ မညီမျှသောသဘောထားများ” နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်.
2016 ခုနှစ်တွင်ဂယ်ရီ Wilson ကနှစ်ခု peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများထုတ်ဝေ:
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။
၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2016) ဖော်ပြမှနာတာရှည်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပပျောက်။
"မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု" ၏မှတ်တမ်း - TEDx Glasgow (2012)